Efa mba nandre ny volotsangana bodofotsy? Izany dia vokatra tsara izay manome fampiononana be. Bodofotsy ireo dia vita amin'ny volotsangana malefaka hiringiriny fibre izay mahatonga azy ho fahafinaretana lehibe ho anareo ny snuggle in.
Bamboo bodofotsy no tian'ny maro noho ny malemy ilay manjarano izay manome fampiononana Nohatsaraina. Bamboo dia malaza noho ny antibacterial fananana. Misy volotsangana Kun, izay voajanahary antibacterial mpandraharaha. Manana ny fahafahana mamono bakteria sy hanimba zavatra izay hampidi fandrahonana lehibe ho ara-pahasalamana. Koa repels bibikely, bobongolo, sy allergens. Izany no mahatonga ny bodofotsy ho salama sy mampahazo aina safidy.
Bamboo fibre lehibe hafa mba manmade kofehy toy ny nylon sy ny polyester. Io lamba no breathable ary afaka ho tena malefaka bodofotsy. Tsy tena absorbent koa. Ny toetra breathable Mampirisika ny lasa etona ny hatsembohana sy ny vatana koa ny mifoka ankasitrahana. Io endri-javatra mahatonga azy ho malaza safidy ho an'ny reny, izay te-hitandrina ny zaza mafana sy ny aina.
Bamboo bodofotsy tsara tarehy tonga amin'ny loko sy habe samihafa. Azonao atao ny misafidy avy amin'ny loko isan-karazany ny matanjaka sy ny fikasana. Small haben'ny bodofotsy misy foana ny zaza sy ny mafana Mafana Nefa ianao raha mandeha. Adult haben'ny bodofotsy lehibe ho an 'ireo, izay te fanampiny fampiononana sy lafo vidy. Ny hery farany malefaka, bodofotsy aina dia tsara noho ny fampiasana ny taona rehetra manodidina. Ity bodofotsy dia mora foana ary afaka hosasana amin'ny rano mafana ao amin'ny milina.
Izy io dia mazava ho mitombo fototra, dia nanamarika fa ny fampandrosoana maharitra. Satria na dia kapaina aza izy, dia azo soloina mora foana. Io no hazo izay maniry haingana indrindra eto amin'izao tontolo izao. Tsy mila famonoana bibikely hitombo. Bamboo manome 40% fanampiny oksizenina sy zavatra simika mampidi-doza avy manala ny rivotra. Ireo endri-javatra manao bodofotsy volotsangana lehibe namana safidy ny tontolo iainana.
Bamboo bodofotsy dia mety tsara ho an 'ireo, izay mora mahatsapa ny synthetic kofehy. Ny endri-javatra mahatonga izany breathable tsara ampiasaina amin'ny lohataona sy ny ririnina. Tsy mahatonga anao hahatsapa mafana amin'ny ririnina ka miaro anao hampangatsiaka amin'ny lohataona mafana.
Fibre io dia manana ny hery sy ny manovaova ny landihazo. Ankoatra izany, dia manana be dia be ny endri-javatra mahagaga hafa toy ny bakteria manohitra ny fahaizany, ambony absorbent, silky malefaka sy mahazo aina sy ny bibikely ary ny allergen repellence fahaizana. Ny bodofotsy vita amin'ny volotsangana no malaza ampiasaina amin'ny Resorts sy ny trano fandraisam-bahiny mirentirenty izay te-hanome fampiononana farany ny vahiny.
Ny vidin'ny bodofotsy vita amin'ny volotsangana miovaova araka ny habeny. Na dia ao aza ireo bodofotsy dia lafo kokoa noho ny ara-dalàna bodofotsy, dia manolotra fampiononana fara-tampony.